विचार: – Online Jagaran
‘खाउँभन्या मर्च्या (खुर्सानी) छैन, नपुग्याउ क्या छ र’ यो आन् (उखान) अब फरक भइसक्यो । अब यस लाई ‘खाउँ भन्या प्याज छैन, नपुग्याउ क्या छ र’ भन्न सकिन्छ । अहिले बजारमा चर्चा प्याज कै छ । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटरलगायतमा ‘प्याजव्यङ्ग्य’ शुरु भएको छ । कतिपय लेख्छन्, ‘विवाह गर्दा एक दाना प्याज दाइजो ल्याउने धोको […]
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । प्राकृतिक श्रोतहरुको सन्तुलनता कायम राखेर जीवनलाई सहज र उत्साहवर्धक वनाउनु नै विकासको उद्देश्य हो । अर्थशास्त्री अमात्र्य सेनका अनुसार विकास भनेको नागरीकहरुको दक्षताको अभिवृद्धि हो । नागरीक दक्षताले स्वतन्त्रताको प्रत्याभुति गराउँदछ र स्वतन्त्रताले नागरीकहरुलाई मनपराएका वस्तुहरु प्राप्ती गर्ने अवसरमाथीको पहुँचलाई वढाउदछ । अनेकौँ मौलिक विविधताका वावजुद हाम्रो समाज एक […]
तपाईं हामीले दैनिक रुपमा दर्जनौँ पटक फलाक्ने शब्द हो ‘विकास’ । चाहे त्यो नकारात्मक कोणबाट चाहे सकारात्मक । जे सुकै होस् यो मुलुकमा सबैभन्दा धेरै जपिने मन्त्र हो ‘विकास’ । तर के विकास भयो त ? यो यक्ष प्रश्नको उत्तर कसरी फर्काउनु ? बरु यहाँ विकासको सपना देख्ने बेला जन्मिएकाहरुले जन्माएका विकास नामका छोराहरु बुढो […]